Ebumnuche 5 Ndị ahia gị anaghị erute oke ha | Martech Zone
Qvidian ebipụtawo ha Nkwupụta Mgbasa ahịa A na-akọ maka 2015 o juputara na stats gafee ahia ngalaba nke kwesiri inyere gi aka igosi oru aka gi banyere ihe a choputara.
Ndị na-ahazi na 2015 na-eme mgbanwe dị mkpa na uto ike. Ndị isi ahịa ga-enwerịrị ike ịmeghachi ka ndị otu ha nwee ọganiihu site na ileba anya karịa ire ahịa na-enye ike ma na-enye ike ndị ahịa ire ahịa na njedebe igbu ahịa na njedebe.
Dika ngalaba ahia na acho inweta otutu mmeri ma nwekwaa onodu ihe ndi ozo, ihe ise 5 n’enyeghi iru ego di:
42% nke ohere kwụsịrị enweghị mkpebi.
41% nke ohere kwụsịrị n'ihi na ahịa dị enweghị ike ịkọwa uru ọ bara.
36% nke ohere furu efu n'ihi na ahịa dị boro gị ọrụ ndị ọzọ ma ghara igbu oge n'ire.
36% nke ohere furu efu n'ihi mpmegharị ihe ndị ahụ na-ewe ogologo oge.
30% nke ohere furu efu n'ihi n'ihi na ndị njikwa azụmaahịa enweghị ike ịhazi ọkaibe n'ụzọ dị irè.
Enwere nghọta dị ukwuu n'azụ ọnụ ọgụgụ ndị a!
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anaghị akwụsị na mkpebi, mgbe ahụ, ịzụlite mmekọrịta ahụ na akpaaka ahịa, ịre ahịa email, na mmemme na ohere mmekọrịta ndị ọzọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ahịa enweghị ike ịkọwa uru bara uru, nyocha nke mbụ na nke abụọ yana akwụkwọ ọcha, nyocha ọmụmụ na akaebe bụ atụmatụ ahịa dị mkpa.
Ọ bụrụ na ererere ọrụ ndị ọzọ ọkụ, akpaaka ahịa dị oke mkpa - site na ịpị ụgbọ ala site na ntinye aka.
Ma ọ bụrụ na ịbawanye ahịa na nchịkwa na-ezo aka na ụfọdụ ọrụ mmadụ na ịnye ọzụzọ ohere n'ime nzukọ.
Ihe omuma ahu nwere ihe ndi ozo choro na ahia na ahia kwesiri itinye nlebara anya nke oma - karie ighota usoro ahia ndi ahia. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ahịa na-ele anya na olulu, M kwere na ha na-atụ uche na ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi na-emetụta a azụ mkpebi - niile na-eche banyere iwulite ma ntụkwasị obi na ikike na atụmanya.
Site na Qvidian
The Ahịa Mgbu Etu akụkọ ahụ na-egosi na ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ taa na-aga site n'iji akọ eme ihe gaa uto ike, ihe mgbochi ndị dị ka ịbawanye ụba, enweghị usoro ịzụrụ ihe na ọdịnaya, yana usoro njikọ ndị nwere oke nchịkọta ha niile na - arụkọ ọrụ ọnụ iji mebie ala ala, igbochi nweta ihe, ma gbochie uto na - adigide. Iji gbagoo ihe ịma aka ndị a, òtù dị iche iche ga-emeziwanye akụkụ dị mkpa nke usoro ahịa iji wuo nke ọma, mepụta ma bulite na atụmatụ ahịa.
Tags: 2015ahịa ịzụ njemahịa ịzụ usoroagbaghara quotasazaghị ahịa quotasUgwuekeihe kpatara ire ereakpaaka ahịaNkwado ire ahịaire ogbugbuAhịa Mgbu EtuAmụma Ahịaoke ahia
Jul 19, 2015 na 8: 29 AM
N'ezie ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nwere ike iduga arụmọrụ ka mma. Ọ ga-enyere m aka ịgbanwe uche m ma mee mkpebi ndị ọzọ.
Dee 16, 2020 na 1: 10 AM
Isiokwu dị omimi. N'ịbụ ndị na-arụ ọrụ n'otu ìgwè ndị na-ere ahịa ogologo oge, m ghọtara isi ihe ndị ị kọwara. Ekwenyere m na isi okwu gị gbasara itinye n'ọrụ akpaaka ahịa. Ọ ga-enyere m aka ịme mkpebi dị mma karịa.
Jenụwarị 23, 2021 na 8:37 PM
Ekwenyere m na enweghị mkpebi ngwa ngwa bụ otu n'ime isi ihe kpatara ndị otu ahịa na-enweghị ike iru ebumnuche ha. Anyị ahụwo nke a ọtụtụ oge. Mkpebi ngwa ngwa bụ azịza ya. “Oge bụ ego!”